Hanao Fivoriamben’ny Vondrom-paritra Indray Izahay
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Zoloa
NEW YORK—Manomana ny fivoriamben’ny vondrom-paritra fanaony isan-taona izao ny Vavolombelon’i Jehovah. Manao ezaka manokana koa izy ireo mba hanasana ny olona hanatrika an’ilay izy. Izao no loha hevitry ny fivoriamben’ny vondrom-paritra amin’ity taona ity: ‘Ny Tenin’Andriamanitra no Fahamarinana!’ Any Etazonia no atomboka io fivoriambe io mandritra ny volana Mey, ary hitohy maneran-tany hatramin’ny faran’ny volana Desambra.
Hoy i J. R. Brown, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah: “Miavaka ny loha hevitry ny fivoriamben’ny vondrom-paritra amin’ity taona ity, satria manasongadina ny fitsipika arahin’ny fianakaviana Vavolombelon’i Jehovah.” Hoy koa izy: “Eken’ny fianakaviana Vavolombelona fa ny Baiboly no boky azo itokisana indrindra ary ao no ahitana torohevitra tsara amin’izao fotoan-tsarotra izao. Hahasoa ny olon-kafa koa io fandaharana io sady ho tian’izy ireo, satria isan-karazany ny zavatra horesahina mandritra an’ilay izy sady azo ampiharina tsara.”
Nilaza Atoa Brown fa tena zava-dehibe amin’ny Vavolombelon’i Jehovah ny fianarana samirery ny Baiboly. Manokana takariva iray isan-kerinandro àry ny fianakaviana Vavolombelona mba hianarana ny Baiboly sy hanaovana fikarohana. Antsoin’izy ireo hoe “Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana” io fandaharana io. Hoy ihany Atoa Brown: “Hisy zava-baovao homena ny tsirairay sy ny fianakaviana amin’ity fivoriamben’ny vondrom-paritra ity, mba hanampiana azy ireo hianatra Baiboly.” Nilaza izy fa izany no “tena handrandrain’ny Vavolombelona isan-taona, amin’ny fivoriamben’ny vondrom-paritra.”
Hita ao amin’ny jw.org, tranonkalan’ny Vavolombelon’i Jehovah ao amin’ny Internet, ny daty sy toerana rehetra hanaovana an’ilay fivoriamben’ny vondrom-paritra hoe ‘Ny Tenin’Andriamanitra no Fahamarinana!’ Afaka mifandray amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah ny mpanao gazety, raha te hahazo fanazavana fanampiny, ohatra hoe ny anaran’ny olona azo ifandraisana eo an-toerana raha te hiresaka momba an’ilay fivoriambe izy ireo.
Video: Fivoriamben’ny Vondrom-paritry ny Vavolombelon’i Jehovah 2013